DO u ashtakoosho | DO
DO u ashtakoosho
Halkan waxaa laguugu siinayaa macluumaad ku aaddan sida aad DO ugu ashtakoo kartid iyo waxa in noola soo ashtakoodo ay keeni karto. Waxaan sidoo kale ka warrameynaa laacibiinta kale ee ashtakooshooyin qabanaya, waxna waannu hageynaa marka laga hadlayo arrimaha takooridda ku saabsan. Haddii aad urur shaqaale xubin ka tahay, laguuguna takooray shaqada waxaad marka hore la xiriireysaa ururkaaga shaqaalaha.
Waxan ayaad ka ashtakoon kartaa
Adiga naftirkaaga ama cid kale ma laga eexday ama la sharaf riday iyadoo ay sababtu tahay jinsi, aqoonsi ama tacbiir jinsi ahaaneed, ka tirsanaasho qolonimo, diin, naafanimo, dabci galmo la xiriira ama da'? Markaas arrintu wey ku saabsanaan kartaa takoorid. Taana DO waad uga ashtakoon kartaa. Xitaa waad ka ashtakoon kartaa haddii shaqa bixiyahaagu si la xiriirta fasax waalidnimo uu kuu takooray.
Waa muhiim in aad dukumiinti-gareysid dhacdada ama dhacdooyinka aad dooneysid in aad ka ashtakootid. Keydi xitaa macluumaadka kale ee gadaal dambe kiiska loogu isticmaali karo caddeyn ahaan. Waxay tusaale ahaan ku saabsanaan karaan macluumaad farriin e-mail ah, farriin taleefan oo qoraal ah, ama wax la duubay oo xoojin kara sheekadaada.
Maxaa dhacaya haddii aan ashtako sameeyo?
Waxaa sanadkii na soo gaara ku dhawaad 2000 oo ashtako. Baarayaasheennu waxay akhrinayaan dhammaan ashtakooyinka si ay u go'aamiyaan haddii macluumaadka aad adiga iyo kuwa kale bixiseen ay keeneyaan in DO ay sameyso hubsiimo (baaritaan). Waa marka ay ashtako u gudubto baaritaan oo keliya marka aannu markaa meel iska taageyno in cidda la ashtakeeyay ay dhab ahaan takoorid sameysay iyo in kale.
Ashtakooyinka aan baaritaanka horay ugu sii gudbeynin waxaannu u adeegsaneynaa shaqadeenna bulsho wax ka beddelidda. Waxay taasi tusaale ahaan ka dhigantahay in aannu aqoonta hormarineyno si aannu go'aan gaarayaasha wax u barno, una saameyno ama waxaannu hormarineynaa waxyaabo taageeraya shaqada shaqa bixiyaha ee isku xuquuq iyo fursado ahaanshada.
Ku dhawaad boqolkiiba toban oo ashtakooyinka ka mid waxay keenaan in aannu hubsiimo sameyno. Waxaannu xitaa sanadkiiba maxkamad la kornaa xaalado yar (ku dhawaad 1 boqolkiiba oo ka mid ah dhammaan ashtakooyinka sanadkiiba).